Fitaovana fanabeazana mikasika ireo varika - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Fitaovana fanabeazana mikasika ireo varika
Ireo fitaovana fanabeazana zaraina eto dia natao indrindra ho an’ireo mpanabe any an-tsekoly na ireo mpanabe amin’ny seharty ny fiarovana entina hisarihana ny sain’ireo ankizy, mpianatra amin’ireo karazana harena ara-voajanahary, ireo karazana varika indrindra fa ireo ahiana ho lany tamingana ary ireo asa fiarovana hampihenana ny tsindry mahazo azy ireo.
Fa amin’ny farany, dia ny zavatra tiana ihany no arovana; ary ny zavatra azo satria nianarana ihany no tiavina.
FITAOVANA NOVOKARIN’NY LEMUR CONSERVATION NETWORK
Ireto fitaovana manaraka ireto dia novokarin’ny ekipa avy ato amin’ny Lemur Conservation Network izay fiaraha-miasa miaraka amin’ny Louisiana Lemur Foundation.
Boky firaketana hitsidihana an’i Madagasikara
Asaina mitsidika faritra telo izay ahitana ireo karazanà varika ny mpianatra na ireo ankizy mandray anjara amin’ny fankalazana. Ireo karazana varika moa dia ny Varikay (Eulemur collaris), ny Simpona (Propithecus diadema) ary ny Sifaka na Tsibahaka (Propithecus coronatus).
Ny faritra tsirairay amin’izany dia manana pejy iray izay takelaka fampahalalana mba hianarana mikasika ireo karazanà varika ireo. Samy asaina
Alaivo eto ny torolalana momba io boky io
Alaivo eto ny boky firaketana hilalaovana
Ity fitaovana iray ity dia manampy ny mpianatra sy ny ankizy hijery ireo varika any amin’ny fahi-bibidia (zoos) na any anaty ala. Raiso an-tsoratra ao anatin’ny fisy atao hoe “ethogram” ny fomba fiainan’ireo varika, ny fihetsiny ary ny fombafombany. Io no entin’ireo mpikaroka hijerena sy handinihina ny fomba fiainan’ireo karazana biby.
Alaivo eto ny fitaovana entina manao ny ethogram
Fisy fampahafantarana ny varika
Ho an’ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny varika ity dia namokatra fisy ho fampahafantarana ny karazana varika telo.
Varika na Eulemur collaris: PDF
Tsibahaka na Propithecus coronatus: PDF
Sadabe na Simpona na Propithecus diadema: PDF
Alaivo eto ny PDF iray ho an'izany fisy izany
FITAOVANA FANABEAZANA HAFA AZO AMPIASAINA
Maro ireo fitaovana fanabeazana hafa vokarin’ireo fikambanana miasa sy miaro momban’ny varika sy ireo primata hafa. Manana tranon-kala azo tsidihana izy ireo. Indro zaraina eto ny sombiny amin’izany fitaovana izany.
Boky fandokoana sy fianarana amin’ny teny Malagasy sy Anglisy
Ity boky ahitana pejy miisa 40 ity dia misy sary natao holokoina sy lalao fianarana amin’ny teny Malagasy sy Anglisy, ao anatin’izany ny fikarohana teny, ny lalao fampifandraisana teny, ny fampianarana ny voambolana, ary ny tantaran’i Madagasikara sy ny Malagasy ary ny varika.
Jereo eto ny momban'ny PICC
Lalao momban’ny varika
Namokatra lalao afaka andraisan’ny olona rehetra anjara ny Chances for Nature. Jereo eto izany sy ao amin’ny rohy Learning apps.
Bokin’ny tetikasa AKO, Afisy, Lesona momban’ny varika
Ny bokin’ny tetikasa AKO dia hita amin’ny teny Anglisy sy Malagasy. Ny mpampianatra sy mpanabe dia afaka maka ny boky sy ny afisy ao amin’ny tranonkalan’ny Lemur Conservation Foundation. Misy amin’ny dikan-teny Malagasy, Anglisy ary Frantsay avokoa ireo boky.
Jereo eto ireo bokin'ny tetikasa AKO
Lalao momban’ny varika, kisary loko ho an’ny ankizy
Ny fikambanana Lemur Conservation Foundation (LCF) dia namokatra karazana lalao natokana ho an’ireo ankizy hianarany momban’ny varika ao anatin’ny tetikasa “Kidz4lemurs”. Maro ireo karazana lalao azo ampiasaina alaina ao anatin’ny tranonkalan’ny LCF ao anatin’izany ny kisary hanaovana loko na karazana sary tanana azo ataon’ny ankizy.
Jereo eto ireo lalao kidz4lemurs
Boky tantara ho fampianarana momban’ny varika
Ny fikambanana ASLM na Association pour la Sauvegarde des Lémuriens de Madagascar mamokatra karazana boky tantara, sary momban’ny varika. Izany dia tarihin’i Catherine Rhiat ary fiaraha-miasa miaraka amin’ny fikambanana GERP.
Jereo eto ireo boky novokarin'ny ASLM
Indro boky iray natokana ho tari-dalàna ho an’ireo mpampianatra maniry hampianatra bebe kokoa mikasika ny tontolo iainana.
Vakio eto momban'ny GERP
Horonan-tsary novokarin’ny GERP
Indro horonan-tsary mihetsika novokarin’ny GERP mitondra ny lohateny hoe « Alan’i Manombo: Reharehan’ny Agnambahy
IREO KARAZANA HORONAN-TSARY
Horonan-tsary novokarin’ny Eyes of the World Films
Indro horonan-tsary fohy momba ireo varika novokarin’ny « Eyes of The World Films » afaka ampiasaina tsara ho fanabeazana sy fanentanana ireo olona sy ankizy eny ifotony izy ireto.
Indro ihany koa horonan-tsary fohy hafa momba ireo varika novokarin’ny « Eyes of The World Films » afaka ampiasaina tsara ho fanabeazana sy fanentanana ireo olona sy ankizy eny ifotony izy ireto.